RealThadin - Page3of 110 - News and Media
တရုတ်နိုင်ငံရေဘေး ၁၄၁ ဦးသေ၊ ပြည်သူ ၃၈ သန်းရေဘေးသင့်နေ . . .
July 13, 2020 RealThadin 0
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁၃ ယန်ဇီမြစ်တစ်လျောက် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် လူ ၁၄၁ ဦး သေဆုံး(သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး ၃၈ သန်းနီးပါး ရေဘေးသင့်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်မီဒီယာများက ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက စတင်ခဲ့သည့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများကြောင့် ဟူပေနှင့် ကျန်ဇီပြည်နယ်များတွင် ရေကြီး ရေလျှံမှုများ၊ မြေပြိုမှုများ […]
အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ကာလမှာ မေတ္တာတရားနဲ့လက်လှမ်းမှီသလောက် ကူညီပေးနေသူကတော့ ဖြူဖြူထွေးပါ။ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေသာမက စည်ပင်ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်ကြမ်းသမားနဲ့ ဆိုက်ကားသမားပါမကျန် အလှူဒါနပြုလုပ်ပေးနေသူပါ။ ဒါ့အပြင် သူရိုက်ရတဲ့ကြော်ငြာလေးတွေမှာလည်း ခက်ခဲနေတဲ့ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေကိုပါ ထည့်သုံးပြီး ကူညီပေးလေ့ရှိသူမို့ ပရိသတ်တွေက လေးစားချစ်ခင်နေရသူဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ မကြာသေးခင်က ဖြူဖြူထွေးရဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးကောင်းကျော်ကတော့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို […]
ရန်ကုန်မိုးကြောင့်ရေကြီးပြီး အခက်အခဲဖြစ်နေ သူတွေကို လိုက်လံကူညီပေးခဲ့တဲ့ SINON
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင် Sinon Loresca ကို မြန်မာပရိသတ်တိုင်း သိပြီး သား ဖြစ်မှာပါ။ Sinon Loresca က ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉)ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကို Model Show တစ်ခုကြောင့် လာရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို သံယောဇဉ်တွေဖြစ်ကာ အခုချိန်ထိ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်း […]
အဖေတစ်ယောက်လို လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးမန်းဝင်းအတွက် ချောရတနာရဲ့ နောက်ဆုံးဆုတောင်း
ပရိသတ်တွေလည်း ချစ်ကြသလို၊ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်း လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော်ကြီး ဦးမန်းဝင်းက သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကို အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမန်းဝင်းက ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်နေ့ နံနက်(၆)နာရီကျော်အချိန်မှာပဲ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမန်းဝင်းရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းအတွက် အနုပညာသားတွေက စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေရရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
အာဇာနည်နေ့တွင် ဥသြဆွဲရန်နှင့် ကားဟွန်းတီးရန် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြား . . .
နှစ် 20ကြာမှ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံအနောက်ဖက်မှာ ကပ်ပါလာတဲ့ သူကကိုယ်ဖြစ်နေမှန်း သိခဲ့ရတဲ့အမျိုးသား
ကံကြမ္မာဆိုတာ ခက်မှန်းရခက်လွန်းပါတယ် ။ မသိဘဲ ကိုယ့်ဘေးကိုဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့သူမျိုးဟာလည်း တစ်ခါတစ်လေမှာကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံက Mr Ye အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟာ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ထားတဲ့သေတ္တာကို မွှေနောက်ခဲ့လို့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 2000 ခုနှစ် July လက Mr Ye […]
လက်ထပ်ပွဲမှာ ချစ်ရသူကိုကြည့်ပီး ၀မ်းသာအားရ ဖက်ငိုကြွေးခဲ့တဲ့ သတို့သား(ရုပ်သံ)
လက်ထပ်ပွဲမှာ ချစ်ရသူကိုကြည့်ပီး ၀မ်းသာအားရ ဖက်ငိုကြွေးခဲ့တဲ့ သတို့သား(ရုပ်သံ) ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည် ။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ အခါမှာ အရမ်းကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်..။ ယောက်ျားလေးတိုင်းက တန်ဖိုးမထားတတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အခုဖော်ပြပေးတဲ့အတိုင်း ပြုမူဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူဟာ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် […]
အတော်လေးကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ အိမ်မြှောင်ကြော် . . .
အတော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ ” ထမင်းပူပူလေးနဲ့ အိမ်မြှောင်ကြော် “ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အထူးဆန်းဆုံးနဲ့ အထူးခြားဆုံးဟင်းပွဲတွေမြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ဆိုရမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟင်းပွဲမျိုးကိုမြည်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့5star hotel တွေ ၊ စားသောက်ဆိုင်အကြီးစားတွေသွားစရာမလိုပါဘူး ။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ဈေးသက်သာတဲ့လမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဒေသခံတစ်ယောက်လိုကိုယ့်ကိုသဘောထားပြီး သွားရောက်စားသောက်ကြည့်ပါ ။ ဗီယက်နမ်ကော်ပြန်ကြော်တွေ […]
တပ်မတော်ကုတင်(၅၀၀) အရိုးကုစစ်ဆေးရုံသို့ တန်ဖိုး ငွေကျပ်သိန်း (၇၀) ဖိုးခန့် သွားရောက်လှူဒါန်းတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသတ်သေဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ သံဖြူဇရပ်က အမျိုးသားတစ်ဦး . . .